घर » Featured » Calrec डेबट्स नयाँ आवेग कोर मा NAB शो न्यूयर्क
Calrec डेबट्स नयाँ आवेग कोर मा NAB शो न्यूयर्क
आवेग कोर एईएसएक्सएनएनएक्स र एईएसएक्सको साथ एक शक्तिशाली अडियो प्रोसेसिंग र मार्ग इन्जिन हो SMPTE 2110 कनेक्टिविटी। आईपी ​​मार्फत नियन्त्रण कनेक्टिविटीको साथ, सतहहरू शारीरिक रूपमा रिमोट र COTS हार्डवेयर प्रयोग गरी मानक सञ्जालहरूमा जडान गर्न सकिन्छ। यो प्रविधिले सबै क्यालेन्डर ग्राहकहरूलाई अर्को पीढी अडियो (एनजीए) र आईपी इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा ट्राफिक बनाउन सक्षम बनाउँछ, र उत्पादन उपकरणको ओवरहाल बिना त्यस्तो लचीलापन प्रदान गर्दछ।
"आवेग कोर एक धेरै मजबूत र स्केलेबल योग्य डीएसपी प्लेटफार्म हो जो किलेरेक को भविष्य विकास पहल संग संरेखित गर्दछ, किनकि हामी हाम्रो ग्राहकहरुलाई आईपी अवसंरचना को एक सहज उन्नयन मार्ग को साथ सहज बनाउन को आपूर्ति गर्छन" डेभ लेट्सन भन्छन्, बिक्रीको क्यालेरेकको वीपी। "आईपी अधिक प्रचलित हुन्छ, यो यो संक्रमणको लागत कम गर्न क्याले्रेको लक्ष्य हो र यसले नयाँ र नयाँ ग्राहकहरूलाई नवीनतम कार्यप्रवाहमा स्तरवृद्धि गर्न खोज्दै अवस्थित र नयाँ ग्राहकहरूको लागि एक राम्रो अनुभव बनाउछ।"
आवेगले 3D इमर्सिभ पथ चौडाई प्रदान गर्छ र एनजीए अनुप्रयोगहरू, 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2 र 7.1.4 इनपुट च्यानलहरूको लागि प्यानिङ प्रदान गर्दछ, बक्सहरू, निगरानी र मेटिङ उपलब्ध छन्। यसमा एक अभिन्न एओआईपी राउटर छ, जसले एनएमओएस खोज र जडान व्यवस्थापनको साथसाथै एमडीएनएस / रावेनना खोज को समर्थन गर्दछ। दुई 5U आवेग कोर संयुक्त पूरा नगदता प्रदान गर्न को लागी संयुक्त हुन सक्छ र आपदा रिकवरी को लागि एक-दूसरे देखि शारीरिक रूप देखि दूरस्थ हुन सक्छ।
आम्लिस कोर को अतिरिक्त, क्यालेरेक यसको शो आर, विस्तार योग्य, IP-आधारित रेडियो प्रणाली मा शो मा प्रदर्शित हुनेछ। R को भौतिक नियन्त्रण प्रणाली टाइप गर्नुहोस् केवल तीन पतली प्यानलहरू: एक fader प्यानल, ठूलो नरम प्यानल र सानो नरम प्यानल। एकीकृत I / O स्रोतहरूको साथ सरल 2U कोर ग्राहकहरूलाई तुरुन्तै अपग्रेड गर्न र तुरुन्तै चलिरहेको छ। एकल कोर डीएसपी स्रोतको साझेदारीको साथ, तीन स्वतन्त्र मिश्रण वातावरण सम्म गर्न सक्दछ। AES67 संगत नेटवर्क को सुविधा संग संयुक्त धेरै मिश्रण इन्जिन को उपयोग को क्षमता को रेडियो को तेजी देखि बदलने को आवश्यकताहरु को साथ राखन को लागि पर्याप्त लचीलापन प्रदान गर्दछ।
क्यालेरीको अपग्रेड गरिएको बियो विस्तारित च्यानल क्षमतासँग कन्सोल पनि प्रदर्शनमा हुनेछ NAB NY। नयाँ विस्तार प्याकेजले 12 बाट 48 इनपुट च्यानलहरू र Brio64 बाट 36 बाट 64 इनपुट च्यानलहरूमा Brio96 डीएसपी गणना बढाउँछ। डीएसपी विस्तार प्याकेजहरू v1.1.6 सफ्टवेयर वा माथिको सबै Brio कन्सोलहरूको लागि उपलब्ध छन्; सफ्टवेयर अपग्रेडहरू निम्नमा Brio दर्ता पछि नि: शुल्क छन् www.calrec.com/brioregistration.
Calrec अडियो विशेष रूपमा हावा र प्रत्यक्ष उत्पादन को लागि अडियो मिश्रण मा उत्कृष्टता को लागि समर्पित छ। एक्सएनएमएक्सएक्स भन्दा बढीको लागि एक प्रसारण विशेषज्ञ, क्यालेरेकले संसारको सबैभन्दा सफल प्रसारणकर्ताहरूको सम्बन्धमा डिजिटल कन्सोलहरूको विकास गरेको छ। बढ्दो कन्सोलहरू सुविधा-चौडा सञ्जालमा अभिन्न अंग हुन्, अनुकूलन कार्यप्रवाह बढाउन, साझेदारी योग्य स्रोतहरू र सजिलै विस्तार गर्न सक्ने क्षमता। धेरै शुरुवातबाट, क्यालेरेकले अभिनव समाधानहरू सिर्जना गरेका छन् जसले प्रसारणकर्तालाई आफ्नो कार्यविधिहरू विकास गर्न र तिनीहरूको उपकरणबाट अधिक मूल्य प्राप्त गर्न अनुमति दिएको छ। प्रीमियम ओडियो समाधानका लागि, प्रसारकहरूले आफ्नो भरोसा कैलेरेकमा राख्छन्। थप जानकारी उपलब्ध छ calrec.com.
पालना Calrec अडियो:
herein देखिने सबै ट्रेडमार्क उनको सम्बन्धित मालिकहरूको सम्पत्ति हो।
डी पागन संचार
द्वारा डी पागन संचार नवीनतम पोस्ट (सबै हेर)
Location Sound Hosts Wisycom Q&A for Broadcast and TV Professionals - जनवरी 15, 2019
Calrec’s Brio Audio Consoles See Major Success in Japanese Market - जनवरी 15, 2019
Newest (and Smallest) Microphone Series by DPA Microphones Presented At NAMM 2019 - जनवरी 8, 2019
2015 बिटरेट कमी प्रसारण इन्जिनियर प्रसारण ईन्जिनियरिङ् Calrec अडियो नियन्त्रण प्रणाली H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC लुक्न isovideo JCT-कुलपति हल्ला कमी स्पियर र तीरहरू UHD / 4K / HD अल्ट्रा HD फोरम viarte भिडियो ईन्जिनियर वरस	2018-10-11
अघिल्लो: मित्र एमटीएसले जस्टिन पललाई प्रमुख मार्केटिङ अधिकारीको रूपमा नियुक्त गर्दछ
अर्को: Arvato प्रणाली RTÉ आयरल्याण्ड मा व्यापक प्रसारण यातायात र अधिकार प्रबंधन परियोजना जीत